Imibuzo Engabuzwayo Nge-Ello | Martech Zone
Imibuzo engabuzwayo malunga no-Ello
NgoMvulo, Septemba 29, 2014 NgoMvulo, Septemba 29, 2014 Douglas Karr
Ndiqinisekile ukuba umntu ubuza le mibuzo, kodwa ndiza kuyibamba ngandlela zonke kuba andikayifumani. Ndajoyina ello Kwangoko- enkosi kumhlobo wam kunye nomlutha wobuchwephesha, UKevin Mullett.
Ngokukhawuleza, ngaphakathi kwenethiwekhi encinci ndahambahamba ndaza ndafumanisa abantu abamangalisayo endandingazange ndibabone ngaphambili. Saqala ukwabelana nokuthetha… kwaye kwakumangalisa kakhulu. Omnye umntu wade wagqabaza ngelithi uEllo unayo loo nto inethiwekhi entsha ivumba. Ngempelaveki, ndichithe ixesha elininzi apho kunakuFacebook… ubukhulu becala ndibukele imifanekiso kwaye ndifumana abantu.
Kutheni Simdinga u-Ello?
I-buzz yangoku ejikeleze u-Ello kunye nokukhula okukhulu kundixelela into ibenye: Asonwabanga ziinethiwekhi esinazo. Abanye abantu bajolise kwinto yokuba uEllo akanamkelwa ngobuninzi, abanye bajolise kwiimpawu. Bobabini baphoswa yingongoma. Ayimanga malunga nokwamkelwa okanye iimpawu, imalunga nokuba uthungelwano lukhuthaza ukuphucula, unxibelelwano olusempilweni phakathi kwabantu.
Ngaba u-Ello Usisicombululo?
Hayi, hayi ngokoluvo lwam. Ndiyazi ukuba u-Ello yi-beta kodwa bacacile ngombono wabo Ukubhala imanifesto:
Inethiwekhi yakho yenethiwekhi yeyabathengisi. Zonke iiposti owabelana ngazo, wonke umhlobo owenzayo kunye nalo lonke ikhonkco olilandelayo liyalandelwa, lirekhodwe kwaye liguqulwe libe yidatha. Abathengisi bathenga idatha yakho ukuze bakubonise ezinye iintengiso. Uyimveliso ethengwayo neyathengiswayo.
Ayikuthethi oku, kodwa ndiza kuyichaza kancinci kwaye ndicacisa ukuba uElo ukholelwa ukuba iqhina kwiidola ezihlanganisiweyo ziyathengiswa, ukuba iinkampani zilutshaba.
Bayaphazama. Abantu banobudlelwane namashishini, iimveliso kunye neenkonzo yonke imihla- kwaye uninzi lwethu luyabuxabisa obu budlelwane. Iinkampani ezakha iimveliso endizithengayo aziyotshaba lwam, ndifuna ukuba zibe ngabahlobo bam… kwaye ndifuna ukomeleza ubudlelwane bam nazo.
Ndifuna ukuba bandimamele, bandiphendule, kwaye banxibelelane nam ngokwam xa besazi ukuba ndiza kuba nomdla.
Intengiso yeendaba zeNtlalo iyasilela kuthi
Kwiintsuku zokuqala zikaFacebook, iinkampani zazivunyelwe ukuseta amaphepha okwakha indawo abahlala kuyo kunye nokukhuthaza ubudlelwane ngaphaya kwabantu abaneempawu abazixabisileyo. Yayisithembiso sentengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo- ukuba akufuneki sityhalele iintengiso phambi komntu wonke kwaye sibanyanzele ngefowuni yokuphazamiseka ukuzama ukuphuma kwintengiso ezimbalwa. Amashishini kunye nabathengi banokunxibelelana bobabini ngonxibelelwano oluhle, olusekwe kwimvume.
Sakhe iindawo zethu zokuhlala saza sazibandakanya… emva koko u-Facebook wakhupha umbhoxo phantsi kwethu. Baqala ukufihla uhlaziyo lwethu lwephepha. Ngoku basinyanzela ukuba sibhengeze kwabona bantu bacele uthethathethwano!
Intengiso yemidiya yoluntu yeyona nto Umgangatho wentengiso wentengiso -Ingatshintshanga ukusukela kwisiqwenga seposi esithe ngqo, intengiso yephephandaba lokuqala, okanye intengiso yokuqala yenjini yokukhangela yatsala umdla wethu kumxholo esiwukhathaleleyo. Intengiso yemidiya yoluntu kukusilela.
Ngaba uElo wahlukile?
Kwiintsuku ezimbalwa ndisebenzise uElo, ndalandelwa ngu @lungelo. Ndifuna ukwazi malunga nabani na ondilandelayo ndaye ndacofa ndaza ndangxama. I-Ausdom ilogo kwaye uhlaziyo lwabo lutyhala iimveliso zabo. Ugh… iSpAM sokuqala sibethe ku-Ello. Ndiyathandabuza ukuba iAusdom luphawu lokuqala phaya, kodwa babengabokuqala ukundilandela ukuze bafumane ukukhankanywa.
Uqikelelo lwam kukuba u-Ello ngoku uza kugqithiswa ziiakhawunti zebrendi (kakhulu njenge-Twitter), kungabikho mahluko okanye umda. Nantsi ingxaki zihlobo zam. Ngelixa sifuna ukwenza ubudlelwane kunye neempawu, asifuni ukuba zityhalelwe ezantsi emqaleni. Ayikokuthengwa kunye nokuthengiswa kwedatha okundikhathazayo kwimithombo yeendaba zentlalo (nangona ukufikelela kukarhulumente kuyo kuyothusa isihogo kum), yinto elizothe yentengiso yamajelo asekuhlaleni endenza bugs. U-Ello uza kugqithwa kungekudala kwaye atshabalalise ngaphandle kokuba benze oku malunga nabantu kuqala kwaye banempawu.
Inethiwekhi yokuncokola esiyifunayo!
Ndiya kuvuya Kunika Naluphi na uphawu lwedatha yam okoko nje ndibanikeza yona ngokutshintshisela umsebenzisi kunye namava okuthengisa. Akukho mfuneko yokuba bayithenge. Andifuni inkampani ukuba ikwazi ukubhalisela iqonga kwaye iqale ukuthetha nam. Ndifuna ukuba balinde bodwa de ndenze inyathelo lokuqala.
U-Ello akayona impendulo kwaye ngekhe abe yimpendulo egweba ngemanifesto yabo. Kodwa alithandabuzeki elokuba silulambele utshintsho! Sifuna enye into ngaphandle kwe-Twitter, i-Facebook, i-LinkedIn kunye neGoogle +. Sifuna inethiwekhi apho kukho izithintelo ezibeka ifayile ye umthengi ophetheyo kwaye nceda umthengisi ukwakha ubudlelwane obuhloniphekileyo kunye nezikhokelo, ithemba kunye nabathengi.
Amashishini ayeza kuxhasa ngemali olu hlobo lwenethiwekhi. Amashishini ahlawula amawaka eedola kwizixhobo zokubeka iliso kunye nokuphendula kwincoko yemidiya yoluntu, ngokuqinisekileyo baya kuhlawula umrhumo wokubhaliselwa kwinethiwekhi ebonelela ngesibonisi simahla kubathengi kodwa yenza ubudlelwane obusekwe kwimvume benziwe kwaye bukhule. I-PS: Ndakhe ndabeka imveliso efana nale kwi-incubator kwaye yadlula. Akwaba bendinayo imali yokuyakha!
Ndithumele isimemo ukuba uyifumene inethiwekhi!
tags: ubukumkaniElloEllo manifestoIintengiso zentlaloImidiya yokuncokolazentengiso zentlaloyentengiso yeendabaSocial Media Marketinginethiwekhi yokuncokolaispemu
Sep 29, 2014 kwi-11: 11 AM
Sep 29, 2014 kwi-11: 27 AM
Ngaphandle kokuba itshintshiwe, kubonakala ngathi yindibaniselwano “ehlawulwayo ye-twitter”.
Yinto engaqhelekanga. Bendingazi ukuba ndizowabeka phi amagqabantshintshi ngale. Nabu ubungqina obuku-Ello: https://ello.co/douglaskarr/post/-mvhqyaB9IYOQ2PwFAu6hA
Okt 6, 2014 ngexesha 9:29 AM
Ndiyazi ukuba ndiyindoda endala kuba ndiyathemba ngasese ukuba abantu baya kuza kwindawo apho baqonda ukuba banokuba nomxholo ongcono ngakumbi ukuba bazimisele ukuhlawula into.
Okt 6, 2014 ngexesha 10:02 AM
Ndilapho kanye nawe!